🥇 ▷ Farriimaha ka socda YouTube way baaba'aan doonaan bisha soo socota ✅
Farriimaha ka socda YouTube way baaba’aan doonaan bisha soo socota
Wax war ah kamaanan helin Codsiga YouTube. Waa mid ka mid ah codsiyada ugu badan ee loo adeegsado deegaanka dabiiciga ah dhammaan howlaheeda waxna uma tarin malaayiin dad ah. Maanta waxaan u haynaa war xun dadka isticmaala kuwa isticmaala qeybta fariimaha. Haa, YouTube waxay leedahay qeybta farriinta oo aad kula wadaagi kartid fiidyowyo dadka kalandarkaada ama saaxiibbadaada ah. Waxay u eg tahay inaadan ka warqabin qaybtan, maaddaama ay bulshada si adag u isticmaasho. Si kastaba ha noqotee, waxaan hubnaa in adduunka oo dhan ay dad badani ka shalaayi doonaan go’aankii ugu dambeeyay YouTube.
Wakiilka codsigu wuu dhammaan doonaa bisha Sebtember. Shirkadda ma aysan sheegin sabab cad oo ay u baabi’ineyso qaybtan, laakiin waxaan qiyaasi karnaa sababta keentay: adeegsiga la’aanta isticmaaleyaasha. Dadka intooda badani xitaa ma oga inay ku wadaagi karaan fiidiyowyada xiriiriyeyaasha iyaga oo u maraya howlo gudaha ah YouTube, markaa waa shey aysan shirkaddu dooneynin inay sii waddo sii wadista.
18-ka Sebteembar YouTube ayaa xiraya qaybta farriinta
Qaybtan farriinta ayaa shaqeyneysa tan iyo 2016 iyada oo ay jirto xaalad leh xanuun ka badan sharaf. Isticmaalayaasha badankood ma isticmaalaan doorashadan oo doorbidaan la wadaag fiidiyowyada WhatsApp, Facebook ama adeeg kale. Kama fikiri karno sabab adag oo aan ku adeegsan karno adeegga YouTube-ka halkii aan ka isticmaali lahayn WhatsApp ama Telegram si aan ula wadaagno fiidiyaha aan daawaneyno. Tani waxay ka dhigtay mid aad u yar oo ay adeegsadeen malaayiin adeegsadayaasha madasha iyo taas ugu dambeyntiina waa la waayey.
Hada hada aad galaysid qaybta fariimaha waxaad arki doontaa ogeysiis ku saabsan YouTube-ka marka la xirayo qaybta la sheegay. Waxay noqon doontaa laga bilaabo Sebtember 18 markii adeeggan la waayo oo aan dib dambe loo istcimaali doonin. Isaga oo la adeegsada dhammaan fariimaha iyo wada sheekaysiga aad lahaan jirtey wuu baabi’i doonaa, in kasta oo aad kala soo degsan karto wada hadaladaas ka hor si aadan u luminin. Dabcan, waa inaad sameysaa ka hor Sebtember 18, maxaa yeelay goor dambe suurtagal ma noqon doonto.
Annagu garan mayno dhaqdhaqaaqa soo socda ee YouTube ee ku saabsan fariimaha, oo laga yaabo inay jooji inaadan qeyb u siinin macaamiisha laakiin u sameeyaasha waxyaabaha ku jira. Waqtigan xaadirka ah waxaan xaqiijin karnaa in farriimaha YouTube-ka ay waayi doonaan, sheekada cusub ee wali lama oga.